Ama-Distilleries asebenzisa i-ultrasonication esebenza kahle kakhulu ukwenza ngcono ikhwalithi yemimoya e-distilled kungakapheli amahora ngaleyo ndlela yeqa noma inciphise ukuguga komgqomo okudla isikhathi, okuthatha kuze kube yiminyaka eminingana. I-Ultrasonics igqugquzela ukuphendulwa kwemishini nokwenziwa kwamakhemikhali, okuthatha iminyaka eminingana ngaphansi kwezimo ezivamile zokuvuthwa, futhi kuyiphindisele emahoreni ambalwa esikhathi sokwelashwa. Ama-distillate amadala ase-Ultrasonically asebekhulile futhi ashelelisiwe abonwa njengotshwala obunamandla, obuzungezile futhi obuvuthiwe obonisa izimfanelo zekhwalithi ezifanayo nemimoya emidala yesikhathi eside.
Ukuguga Okukhuthaziwe Kwe-Ultrasound Kwemimoya Efihliwe
Iziphuzo ezinotshwala eziningi ezisezingeni eliphakeme zidinga ukuba zindala emigqonyeni isikhathi eside. Inhloso ukudlulisa ukunambitheka okuvela okhunini lomgqomo (isb. I-oki, i-maple, i-acacia, i-chestnut, i-cherry njll.) Kumoya o-distilled noma ewayinini. Ngesikhathi sokuguga, kwenzeka okuningi kwamakhemikhali, aguqula kakhulu ukunambitheka nephunga lesiphuzo. Kodwa-ke, ukuguga kuthatha isikhathi futhi kubiza kakhulu. Yingakho izinga eliphezulu, utshwala obudala kanye newayini kuyabiza. Ngakho-ke, ubuchwepheshe bokuguga kwe-ultrasonic buhehe intshisekelo ebanzi nokwamukelwa okusheshayo kusuka kuma-distilleries kanye nezivini.
I-Ultrasound isivele yaziwa ngezinhlelo zayo ezahlukahlukene, njengokuxubeka, ukuguqulwa kokuthungwa kanye nokukhishwa kwe-flavour ku-gourmet cuisine kanye nasekusebenziseni ukudla kwasezimbonini. I-Ultrasound isetshenziswa ngempumelelo ekugugeni okufakelwayo ngesikhathi senqubo yokuvuthwa kwemimoya e-distilled, iwayini neviniga.
Ucwaningo lwesayensi seluvele lukhombisile ukuthi ukwelashwa kwe-ultrasound ku-approx. I-20 kHz inethonya lemimoya esetshenzisiwe, isb. Iziphuzo ezidakayo zerayisi, kahle. Ukuguga kwe-Ultrasonic ku-20kHz kuthole imiphumela yokuvuthwa engcono kune-sonication engu-1.6 MHz. U-Chang (2005) wafinyelela esiphethweni sokuthi i-20 kHz i-ultrasonic irradiation iyindlela enhle ehlukile yokuguga iziphuzo ezidakayo. (bheka uChang, 2005)
Iprosesa le-bench-top ultrasonic I-UIP500hdT (500W, 20kHz) ilungele ama-micro-distilleries ukuba aguge futhi aqede imimoya eyi-distilled.
Izicelo ze-Ultrasonic kuma-Distilleries
Ukumnika / ukudala amanothi akhethekile okunambitheka
Ukuthambisa imimoya enokhahlo
Ukwandiswa kwamafutha acid wamahhala kuma-esters anamakha
Ukuguga nokuqedwa kwe-Ultrasonic
Ukuguga kwemimoya newayini ngendlela ejwayelekile yokuguga komgqomo isikhathi eside kuyinkqubo ethatha isikhathi. Umoya ongakavuthwa udinga isikhathi sokungena phakathi kwezinkuni zomgqomo noma izinkuni zokhuni. Ukudluliswa kwesisindo phakathi kuketshezi nokhuni, lapho izinhlanganisela zokunambitheka ezinjengama-molecule okunambitheka okuguquguqukayo adluliselwa kulolo ketshezi kuhamba kancane. Ngakho-ke, ama-distilleries amaningi azama ukusheshisa ukuvuthwa ngokusebenzisa imigqomo emincane ngoba lokhu kuthuthukisa isilinganiso esiphakathi kwendawo yokhuni noketshezi. Kodwa-ke, noma ngabe lokhu kungathuthukisa umbala futhi kunikeze umoya ukunambitheka okumnandi futhi okuncane okuzungezile, akwanele ukufihla noma ukususa ubulukhuni botshwala obungakakhuli ngokugcwele.
Isixazululo: Faka i-ultrasonication kunqubo yokuguga. I-Ultrasonication iyinqubo yokucubungula ngomshini, edala i-cavitation, i-shear enamandla nokuxakaniseka. La mandla aminyene ngamandla kaagcini ngokudala iziyaluyalu nokuxokozela kulolo ketshezi, kodwa futhi akhuthaza nokungena kuketshezi okhunini. Lokhu kusho ukuthi, umoya noma iwayini liyakwazi ukungena lingene liphume kumatrix esitokisi sokhuni. I-matrix yeseli yezinkuni iqukethe ama-molecule okunambitheka, okunikeza imimoya esegugile newayini isixha sabo esiyingqayizivele nokunambitheka okuhlukile.
Ngenkathi obunye ubuchwepheshe bokuxuba obufana ne-paddle noma i-blade agitators buhambisa nje uketshezi ngaphezulu kobuso bokhuni, i-ultrasonic cavitation iphula ukwakheka kwamangqamuzana kanye nemiphumela ngaleyo ndlela ekukhishweni okusebenzayo futhi okusheshayo kwama-molecule enambitha.
Imimoya esanda kufakwa i-distilled inokunambitheka okunzima, okungabangelwa ukungabi bikho kwamakhemikhali ahlukahlukene. Yingakho iziphuzo ezidakayo zidinga isikhathi sokuvuthwa ngemuva kokuhluzwa. Phakathi neminyaka eminingana yokuguga emiphongolweni yamapulangwe noma emiphongolweni, imvamisa ngaphansi kokufakwa kwama-oak chips noma amanye ama-botanicals anikela ngokunambitheka, ukusabela kwamakhemikhali okuningana okufana ne-esterification ne-oxidation kwenzeka emoyeni. Ukuhamba kancane kwalokhu kusabela kwamakhemikhali kwenza ukuthi kudingeke ukuthi i-distillate ihlale isikhathi eside emgqonyeni.
Qinisa futhi usheshise ukuvuthwa nge-ultrasound: I-Ultrasound inikeza isisombululo esilula nesithembekile – lokhu kuphendula kwamakhemikhali okuhamba kancane kungasheshiswa kalula ngokusetshenziswa kwamagagasi amakhulu e-ultrasound. Ngesikhathi sonication uketshezi, lo mkhuba cavitation acoustic uyabonakala. I-acoustic cavitation yaziwa kahle ukukhuthaza ukusabela kwamakhemikhali. Lokhu kusho ukuthi, i-ultrasound isheshisa izinqubo zamakhemikhali ze-esterification kanye ne-oxidation kuma-distillates futhi inciphisa ukuvuthwa kakhulu.
Ngokwengeziwe, imijikelezo eshintshashintshayo ephezulu yengcindezi / yengcindezi ephansi ye-ultrasonic cavitation icindezela umoya o-distilled ungene ezimbotsheni zezinkuni ngaleyo ndlela kwandise ukudluliswa kwesisindo phakathi kuketshezi nokuqina okukhulu. I-oaking ekhuthazwa nge-Ultrasonically kanye nokumnika namanye ama-flavour compounds avela kwizithelo, amakhambi njll kususelwa kumgomo wesizinda se-ultrasonic. Funda kabanzi mayelana nesizinda se-ultrasonic se-botanicals!
Ukuxegisa Ukunambitheka Kwemimoya
Imimoya e-distilled, ikakhulukazi uma ingagugile isikhathi esiningi, ivame ukukhombisa iphrofayili enambithekayo enambitheka ngenxa ye-asidi ephezulu / inani eliphansi le-pH. Imimoya ene-asidi ekhulunywa kakhulu nenamanani we-pH angaphansi kuka-3 iguqula imimoya neziphuzo zibe isiphuzo esine-asidi (okufana ne-asidi yejusi lewolintshi). Ubushelelezi bemimoya ikakhulu kungumsebenzi we-pH.
Ngokwengeziwe, amakhemikhali afana ne-isopropanol adinga isikhathi sokuvuthwa ukuze asabele ngama-fatty acids wamahhala ukuze kwakhiwe ama-ester anamakha. Lawa ma-esters emimoya e-distilled ayizinto ezinamakha, ikakhulu ezibhekele isixha nokunambitheka. I-Ultrasound ne-ultrasonically-promotion oxidation isheshisa ukwakheka kwalawo ma-esters afunwayo futhi inciphise ama-congener angafuneki – ukunciphisa isikhathi sokuvuthwa kweminyaka eminingana kwehle kube ngamahora ambalwa.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Ukuguga Kwemimoya Efihliwe newayini
Inqubo esheshayo ephawulekayo
Ukunambitha okuthuthukisiwe nobushelelezi
Ama-Ultrasonicators anamaseli wokugeleza wokuguga, okweqile nokuqedwa kwemimoya efakiwe. I-SOnication inciphise isikhathi sokuvuthwa kusuka eminyakeni eminingana yehle iye emahoreni ambalwa.
I-Ultrasonication Iziphuzo Ezithuthukisiwe Zotshwala
Amagagasi e-ultrasound anamandla amakhulu asevele asetshenziswa ngempumelelo eziphuzweni eziningi ezibandakanya utshwala kubandakanya i-whisky, i-bourbon, i-scotch, i-rum, i-tequila, i-mezcal, i-vodka, i-sherry, i-absinthe, i-vermouth, iwayini lelayisi, i-sochu, i-grappa, i-schapps, i-gin, iwayini elibomvu , iwayini elimhlophe, i-zinfandel, kanye nobunye utshwala. I-Ultrasonication isetshenziselwa ukuguga nokuqina kokuqina nokuvuthwa kanye nezinqubo zokukhipha nokufaka. Sekukonke, ukwelashwa kwe-ultrasound kuholela kuziphuzo eziguqulwe ngokuzuzisayo namawayini.
Ama-Ultrasonicators Wokusebenza Okuphezulu Wokuguga Nokuqeda Imimoya Efihliwe
I-Hielscher Ultrasonics inikezela ngamandla ama-processor aphezulu we-ultrasonic, embonini yezokudla neziphuzo kusukela emashumini eminyaka. Ama-Distilleries kanye nama-wineries asebenzise ubuchwepheshe be-ultrasonic ukukhiqiza iziphuzo ezidakayo ezisezingeni eliphakeme ngaphansi kwezimo ezisebenza kahle, okungukuthi, ukwelashwa okuphuthumayo kanye nezimo ezilawulwa ngokunembile.
Ama-ultrasonicators ama-Hielscher ayatholakala nganoma yisiphi isayizi, kusuka kudivayisi yokubamba ngesandla yokucwaninga nokulawulwa kwekhwalithi kuma-bench-top kanye nezinhlelo zokushayela ama-micro-distilleries kanye nama-distilleries asezingeni eliphakathi kanye nama-ultrasonicators aphezulu kakhulu abakhiqizi abakhulu bomoya bezentengiselwano.
Onke ama-processor we-Hielscher ultrasonic afaka ubuchwepheshe besimanje kufaka phakathi ukubonisa kombala wedijithali, isoftware eyinkimbinkimbi, amasethingi we-smart, okuzenzakalelayo kwedatha yokuprosesa ekhadini le-SD elihlanganisiwe, kanye nesilawuli kude sesiphequluli sokusebenza okuqondile, imiphumela ephindaphindwayo nokuzalisekayo, kanye nokuphakama kakhulu ubungani bomsebenzisi. Amakhasimende emhlabeni wonke asebenzisa ubuchwepheshe be-Hielscher Ultrasonics kuma-winery nakuma-distilleries athola imiphumela emihle ekuhlanzeni, ukuguga, ukufaka i-oak nokufaka imimoya namawayini.
Hielscher Ultrasonics’ amaprosesa asezimbonini e-ultrasonic angaqhubeka ngokuletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu futhi enzelwe ukusebenza kwe-24/7/365. Ukuqina nokuthembeka kuyizici ezisobala zekhwalithi yawo wonke ama-ultrasonicators ama-Hielscher.
Imimoya Echithiwe kanye Notshwala
Imimoya e-distilled, utshwala obususelwe kanye notshwala kuchaza isiphuzo esidakayo esenziwe yi-distillation yezinhlamvu, izithelo, noma imifino ebiliswe ngaphambili ngokusebenzisa ukuvutshelwa kotshwala. Ngesikhathi senqubo yokuphuzisa utshwala, uketshezi lugxile ekwandiseni utshwala balo ngevolumu (vol%). Imimoya e-distilled nophuzo oludakayo kuqukethe utshwala obuningi kakhulu (i-ethanol) kunezinye iziphuzo ezidakayo ezifana newayini, ubhiya noma iziphuzo ezidakayo.Izici ezinamakha zemimoya zitholakala kakhulu ezintweni zokusetshenziswa zezolimo, ezicutshungulwa phakathi kwezinyathelo ezahlukahlukene zokwelashwa kufaka phakathi ukuvutshelwa, i-distillation , nokuguga komgqomo.